I Neny no tena « FAVORI » – MyDago.com aime Madagascar
I Neny no tena « FAVORI »
Mbola ao anatin’ny fampielezan-kevitra ho an’ny fifidianana filoham-pirenena hotanterahina amin’ny 23 okotobra izao isika eto Madagasikara. Efa feno dia feno ny fandaharampotoana ho an’ny kandida Dr Robinson izay natolotry ny movansy Ravalomanana sy ny Avana. Angidim-by hatrany no hitetezana ireo disitrika samihafa eto amin’ny Nosy.
Moramanga : Vahoaka mahery fo
Tao Moramanga no nanombohan’ny kandida Dr Robinson ny fampielezankeviny ny Sabotsy 28 Septambra 2013 teo. Angindim-by roa no nitondra ireo delegasiona izay nahitana an’i Neny sy ny mpiaradia aminy, ary ny kandida Dr Robinson. Teo amin’ny kianja fanaovam-baolina tao Moramanga no nanatanterahana izany hetsika fampielezankevitra ho an’ny fiffidianana filoham-pirenena izany. Vory lanona ny vahoaka tao Moramanga izay vonona nihaino ny lahateny sy ny fanentanana isankarazany. Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby ny filoha Ravalomanana toy izay efa nahenointsika azy nandritra izay fampielezan-kevitra izay. Naneho ny hafaliana izy raha naheno ny horakoraky ny vahoaka tao an-toerana. Fantatro hoy izy fa misy ny misalasala ary manontany tena. Ny Dr Robinson hoy izy no safidy nataon’i Dada, ka efa niara niasa an-taonany maro izy ary izao matoky azy. Noho izany hoy ny filoha Ravalomanana ianareo aty Moramanga dia manana ny maha izy azy, manana ilay mahery fo. Tsy maintsy mifidy ianareo amin’ny 25 okotobra izao ka ny laharana faha 33 dia ny kandida Dr Robinson no fidiana. Mahafantatra hoy izy ny Dr Robinson fa marary ny firenena, ka mila mpitsabo, mila olona mahatoky ny firenena. Fantatrareo tsara hoy izy ny zavatra nataoko teto Moramanga , fananganana orinasa sherit izay niara niasa tamin’ny vahiny. Na ny vahiny aza hoy i Dada dia nilaza fa mety ny safidy ka tsy nisalasala aho milaza aminareo fa mahatoky antsika ny mpiaramiasa rehetra na eto an-toerana na any ivelany. Nanafatra ihany koa ny tenany ho an’ireo mbola misalasala. Matoky ahy ianareo fa amin’ny andro kely sisa iainako dia hanaso abako ny fireneko. Aza amidy ny safidinao hoy izy ka misy manome vola fa raiso ny vola fa adala tompo. Neny kosa raha nandray fitenenana dia mbola namerimberina tamin’ny vahoaka ireo efa voalazany tany amin’ireo faritra hafa efa nandalovany. Ny kandida Dr Robinson dia nanambara fa vahoaka mahery ny eto Moramanga satria misy ny taolambalon’ny mahery fon’ny firenena. Betsaka hoy izy ny zavatra nataon’ny filoha Ravalomanana teto amin’ny firenena toy ny ambulance izay napetraka tao amin’ny hopitaly. Toy izany ihany koa ny fitrandrahana ao Ambatovy izay raha tanteraka an-tsakany sy an-davany dia tsy ohatra izao isika. Tamin’io fotoana io ihany koa no nanararaotan’ny kandida Dr Robinson nanolorana ny fandaharanasany izay hotanterahina rehefa lany ho filohampirenena ny tenany. Anisan’izany ireo izay mahakasika ny faritra Moramanga sy ny manodidina toy ny tetikasa fanaovana jiro ho an’ny mponina. Eo ihany koa ny fanaovana kianja ao Moramanga, Ny lafiny fampianarana, ankoatra ny efa nambarany fa atao maimaimpoana ny fampianarana eny amin’ny ambaratonga voalohany dia hatsangana ao Moramanga ihany koa oniverisite. Rehefa avy eo moa dia nizotra nankany Antanambao Manampotsy ny dian’ireo delegasiona nihaona tamin’ny vahoaka tany an-toerana.
ANTANAMBAO MANAMPOTSY : EFA SASA NIANDRY AN’I NENY NY VAHOAKA
Nitohy tao Antanambao Manampotsy ny fanentanana ny olona hifidy amin’ny fifidianana filohampirenena hotanterahana amin’ny 25 okotobra izao. Vahoaka marobe no niandry an’i Neny sy ny Dr Robinson izay natolotry ny movansy Ravalomanana sy ny Avana tany an-toerana. Naleon’ireo mponina mihitsy nanajanona ny asa amandraharahan’ny andavanandro toyizay tsy hanatrika ny hetsika , hahafahana mahita mivantana an’i Neny sy ny kandida Robinson.Efa sasa niandry an’i Neny ny vahoaka tao an-toerana. Na dia tany lavitra andriana aza moa Antanambao Manampotsy dia tonga ireo delegasiona ireto. Nisy hatrany lahateny isankarazany nataon’ireo tomponandraikitra izay nanao izany. I Neny moa raha nandray fitenenana dia nanentana ny mponina mba ho tongahifidy ny kandida Favori Dr Robinson izany. Fanolorona hatrany kosa ny fandaharanasa izay hotanterahiny no nataon’ny kandida Dr Robinson rehefa nandray fitenenana ny tenany. Tsy adinony ihany koa ny nanazava ny olona ny mahakasika ity bileta tokana ity, izay hampiasaina amin’ny fiffidinana filohampirenena ny 25 oktobra izao.
BRICKAVILLE : TSY NISY ARTISTA FA BE OLONA HATRANY
Nihazo avy hatrany an’i Brickaville ny kandida Dr Robison sy i Neny ary ireo mpiara dia aminy rehefa nahavita ny fanentanana tao Antanambao Manampotsy. Vahoaka maro ihany koa no nanoina ny hetsika tany an-toerana tamin’io fotoana io. Na dia nisy aza ny kandida hafa nanao fanentanana, fampielezankevitra dia tsy nahazo olona firy izany, raha oharina amin’ny mpanohana ny movansy Ravalomanana. Ny kandida Dr Robinson raha nandray fitenenana dia nanome toky ny vahoaka fa hijery akaiky ny fampandrosoana iny faritra iny. Masoandro maty no nampalahelo tamin’ity hetsika ity satria nalai-nisaraka ny roa tonta na dia tsy nisy artisa aza.
Auteur Solo Razafy*Publié le 29 septembre 2013 29 septembre 2013 Catégories Politique
8 réflexions sur « I Neny no tena « FAVORI » »
Rehefa i Dr Robinson ry zareo no tapaky ny rehetra fa ho solotenan’ ny mpiaro ny ara-dalàna amin’io fifidianana io, dia tsara angamba tsy asiana izany resaka hoe i Neny no tena « favori » izany â ! Miala tsiny aho r’Ingahy Solo Razafy !
Iza moa no tsy mahalala fa mbola tena ankafihizin’ny vahoaka ny Filoha Ravalomanana mivady ? Na ny mena sofina aza dia mahafantatra tsara an’izany !
Aoka ho tohizan-tsika arak’izay fara herin-tsika ny fanohanana an’ny Dr Robinson ê !
Toko telo mahamasa-nahandro ! 1er tour dia vita !
Marina ny an’i KintanaMananDrambo aoka tsy asiana fizarazarana eto. Marina ny lazain’i Solofo nefa tsy i Neny no tohanana ho filoha fa i Dr Robinson.
Noho izany mandresy ny Dr Robinson, mandresy i Neny, tonga i Dada.
Fidio ny n°33, izay aloha voizina. Aoka tsy hanjakan’ny zarazarao anjakana ny tolona ataontsika fa tsy kely làlana ny ratsy. Naverin’i Dada matetika izay hafatra izay.
Fidio ny N°33
30 septembre 2013 à 3 h 36 min
TENA OK NY FIZOTRY NY FANDAHARANA TAO AMIN NY MATV NIARAKA TAMIN I DR JLR ALINA. MASAKA AVOKOA NY HEVITRA NIVOAK. MANKAHERY ANAO DR JLR. BETSAKA NY OLONA MIASA MANGINA ANY AMBADIKA ANY MBA HO 1 ER TOUR DE VITA FILOHA DR JLR.
MAHAKASIKA AN I DADA SY NENY. TSARA HAVERIN I NENY IHANY AMIN NY OLONA SATRIA IZAY NO NAMISALASALA NY SASANY SATRIA METY VAOVAO MIVILANA NO VOARAINY. HAVERINA FA NOSAKANAN I FOZA TAMIN NY FOMBA REHETRA IZY TSY HILATSAKA? DADA MOA DIA TSY NAVELA NODY MIHITSY.
ISIKA NEFA TSY MATAHOTRA FIFIDIANANA. IZAY NO ANTONY HANOHANANA AN I DR JLR.
Za koa aloha dia gaga ny amin’ilay lohateny . MBA mila mitandrina , fa saro-paddy ny communication, misy ol tsy mahazo dia mbola hitady ny sarin’ny Neny ao @ bileta inika ihany raha izao no hatao, fa misaotra an’i Neny alo fa dia tena mahery fo ianao.. Tsy hiadian-kevitra izay.
DR robinson zany sari-bakoly fotsiny @ fifidianana ah…hihihi….
Aza manao ory havamanana, ohatran’ny gasy petaka toa’nareo !!!
Rehefa tsy voasintona tao anatin’ny 3 3 aloha dia mangina !!!
1 er TOUR de vitaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
Io tsy maintsy, ary averina mihintsy TSY MAINTSY, 1 er tour dia vita !
Mba ataovy an’eritreritra izany hoe hiandry desambra izany !
Ary raha misy cyclone tampoka amin’io ? Ny volana zanvie sy febroary efa fantatra fa volana tsy azo hanaovana fifidianana izany !
Ny vahoaka koa efa leo sy reraka ny krizy noho ireto tsy valahara ireto !
Raha te hiala amin’ny krizy : Dites 33 hoy ny dokotera !
Telo dia telo : Dr Robinson + Dada + Neny dia Ara-dalàna + Fandriampahalemana + Fandrosoana
Ho an’ilay tsy misaina etsy ambony !
Dr Robinson sari-bakoly hoe ? Tsy maninona fa sari-bakolin’ny VAHOAKA MALAGASY !
Fa ilay dondrona mba inona ? Ary ireo mpanongana nirotsaka ho fidiana ? Sari-bakolin’ny mena sofina sy ireo mifitra amin’ny tanana an-kavia daholo !!
Mpianatra avy eny « Vonovorona » !
Rehefa tsy azonareo hatr’izay izay takianareo, dia mba mipetraha kely aloha ! Avelao ny vahoaka hikarakara fifidianana ! Olona anisan’izay heverina fa hoe manantsaina ianareo !
Dimy taona izao ny vahoaka no ao anatin’ny haizina, tsy hita avy any aminareo akory na labozia kely aza, na fanairana mba hahafahin’ny vahoaka manokatra ny masony !
Raha tsy vonona ny hianatra ianareo amin’izao fotoana, dia rehefa avy mamely bebeksa dia manaova lasiesta sy izay azonareo atao, ankaotry ny mandrebireby mpianatra sy vahoaka !!
Atsaharo ity fitiavan-tena !
Futurs polytechniciens ianareo, fa sao dia ho lazain’ny olona hoe « POLYTECHNICHIENS GALEUX » !
Précédent Article précédent : Andian-tsary fampielezan-kevitra tao Toamasina
Suivant Article suivant : FILOHA RAVALOMANANA : AZA MIFIDY IREO FOZA IREO NA IRAY AZA